Fantina sy fintina - NewsMada
Par NewsMada sur 19/10/2013
Hanomboka amin’ny fomba ofisialy sy hampahafantarina, ny alatsinainy izao etsy Antaninarenina, ny fanaraha-maso ny fifidianana ataon’ireo iraka manokana avy amin’ny Vondrona afrikanina (UA). Manana mpanara-maso 71 izy ireo, hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 25 oktobra izao. Tratry ny antsojay koa ny kandidàn’ny Mamafisoa, Rajemison. Nambaran’izy ireo tao Antaninarenina, omaly, ny fisian’izany tany Miandrivazo nandritra ny fanaovana jery todika ny herinandro telon’ny fampielezan-kevitra. Nobodoin’ny kandidà iray ny toerana roa azo namoriam-bahoaka. Na izany aza, notsiahivin’ny kandidà laharana faha-23 fa laharampahehany ny famerenana ny fiandrianam-pirenena na politika na toekarena na kolontsaina.
Hamerina ny hasin’ny depiote ny kandidàn’ny Madagasikara mandroso (Maman). Nohamafisin’izy ireo, omaly, teny Ampandrana izany. Vita rahateo ny antsapaka fandaharana ireo kandidà ao amin’ny boriborintany faha-5 ka laharana faharoa ny kandidàn’izy ireo, Randriamananjara Aristide Olivier. Mampiavaka ity farany io vina io sady efa niantsoroka andraikitra tao Tsimbazaza rahateo ny tenany.